That's so good, right?: Blowing the Big Boys in the Bluebell Woods
ကျွန်တော့်အဖေက တခြားမြို့ကို တာဝန်အရပြောင်းပြန်ပြီ။ နေရာသစ် ဒေသသစ်ကို နွေဦးရာသီမှာ ရွှေ့ဖြစ်ပါမယ်။ နေထိုင်ရမယ့် အိမ် အသစ်ကရော ဘယ်လိုရှိမယ်မသိဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပြဿနာပါပဲ။ ကျောင်းအသစ်စတက်ရတဲ့အချိန်က အားလပ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက်နဲ့ အတော်ကပ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရဖို့ မိတ်ဖွဲ့ချိန်တောင် အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ နွေရာသီရက်တွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရမယ်မသိတော့။
ကျောင်းပိတ်ရက်တွေရဲ့ နှစ်ရက်မြောက်နေ့ရောက်လာတော့အတော် ပျင်းလာပါပြီဗျာ။ ဒါကြောင့် အိမ်ရဲ့အရှေ့က ရှည်ချင်တိုင်းရှည် နေတဲ့ မြက်ခင်းတွေကိုရိတ်ပြီး ပုံဖော်၊ မာမီ့ နှင်းဆီပျိုးပင်တွေကို နေရာချစိုက် စသဖြင့် လုပ်အားပေးနေဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင် ဘောင်းဘီတိုနှင့် အီမ်နေရင်း တီရှပ်အစုတ်တစ်ထည်ဝတ်လို့ပေါ့။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်သွားတဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေကို ကြည့်ရင်း မြက် ရိတ်စက်ကို ထောင့်တစ်နေရာမှာ ခဏချထားလိုက်ပါတယ်။
အသံကြားရလို့။ ဟုတ်တယ် ခေါ်သံတွေကြားလိုက်ရလို့ပါ။ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကိုဦးနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့နှစ်ယောက်ဗျ။ ကျောင်းရဲ့ ဘော လုံးအသင်းမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်။ ကျောင်းရောက်ကာစမှာ သူတို့ကစားတဲ့ပွဲတွေကို ကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို တကယ်မရင်းနှီးဖြစ်ခဲ့။ ကျွန်တော် ဒီမရောက်ခင် ရောက်နှင့်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေလေ။
ကိုဦးကမေးတယ် သူတို့ရဲ့ အချိန်ဖြုန်းမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုအပေါ် ကျွန်တော်သဘောတူရင် ခေါင်းငြိမ့်ပါဆိုပဲ။ 'ထွန်းထွန်းနှင့် ငါ နက်ဖြန် ခေါင်းလောင်းပြာ သစ်တောထဲ သွားမလို့၊ မင်းလိုက်ချင်ရင် လိုက်လို့ရအောင်ပြောတာ။ ငါတို့ စားစရာမုန့်တွေ၊ဖျော်ရည်ဘူးတွေ၊ ကန် ဖို့ဘောလုံးတစ်လုံးလည်းပါမယ်၊ ပျော်စရာအရမ်းကောင်းမှာကွ'
ကျွန်တော်က ဟုတ်ကဲ့လို့တောင် ပါးစပ်က မပြောနိုင်သေးဘဲ ခပ်မြန်မြန် သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ အချိန်သုံးရတာ က ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း အချိန်ဖြုန်းရတာထက် ပိုပြီး အပျင်းပြေမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာ ယူစရာရှိတာယူပြီး ရွာလယ် လမ်းမကြီးအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာကြပါတယ်။ ပြီးတော့ လမ်းသွယ်လေး တစ်ခုအတိုင်း ဆက်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ သစ်တောအုပ်ကြီးရဲ့ အစပ်ကိုရောက်တော့တာပေါ့။ ပထမတော့ လမ်းသိပ်မရှုပ်တဲ့ လမ်းကနေတောထဲနက်သထက်နက်အောင် ၀င်လာလိုက်တာ ရေတွေအရမ်းကြည်တဲ့ ရေကန်ငယ်လေးတစ်ခုအနားအရောက်မှ အဆုံး သတ်လိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံး အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီတွေချွတ်ပြီး ဘောလုံးကို အားရပါးရကန်ကြပါတယ်။ နည်းနည်းမောတော့ မြက်ခင်းပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ကာနေ့လယ်စာကို လွေးကြပါတယ်။ ခပ်ပါးပါးမြေပြင်ကို ထိုးကျနေတဲ့ နေရောင်အလင်းတန်းများအောက်မှာ နုပျိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ချွေးတွေရွှဲနေကြတာဗျ။ ထွန်းထွန်း သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီပါမကျန် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရာသီ ဥတုအကြောင်းပြပြီး ခပ်သွယ်သွယ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ထိပ်အရေပြားမဖြတ်ထားတဲ့ ခပ်တုတ်တုတ် ငပဲကို ကြွားတာနေမှာ။ ကိုဦးလည်း အလားတူပဲ ထွန်းထွန်းကိုကြည့်ပြီး အ၀တ်တွေ ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အ၀တ်အစားပါသူဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲရှိ တော့တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်ကပဲ အ၀တ်မချွတ်ရင် ယောက်ျားမဟုတ်သလိုလို အကြည့်နဲ့ အဲဒီနှစ်ယောက်ကကြည့်နေတာကြောင့် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ၊ အတွင်းခံနှင့်ခြေထောက်မှာဝတ်ထားတဲ့ ရှူးပါမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် လုံးတီးဖြစ်ကရော့။ ထွန်းထွန်းမြက်ခင်းပေါ် ပက်လက်လှန်ပြီး သစ်ပင်တွေကြားက ထိုးကျလာတဲ့နေရောင်တွေကို လရောင်များအောက်မေ့နေသလားမသိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးအေးဆေးဆေးပြနေ တယ်။ ခဏနေတော့ သူ့ငပဲကို ဟိုကိုင်ဒီကိုင်နှင့် စတင်ပွတ်သပ်ပါရော့။ မြက်ခင်းပေါ်မှာ လှဲနေစဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အသစ် လေးက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ကလိတော့တယ်။ နောက်တော့ ကလိတာကနေ ငပဲကိုကိုင်ပြီး -ုတာအဖြစ်ပြောင်းသွားရဲ့။ ထွန်း ထွန်းက ဒူးအ ထက်ပိုင်းကိုကစားနေပြီး ကိုဇော်က ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေကို ကစားနေတာ သူတို့လက်တွေ အလယ်ပိုင်းမှာ မဆုံခင် အထိ ဆိုပါတော့။
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မတရားထွားလာတဲ့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို ကိုယ့်ဘာသာကိုင်ပြီး ကစားလိုက်တယ်။ အထူးအဆန်းတစ်ခုကို အံ့သြမှင်တက်မနေတော့ဘူး။
ဒီနှစ်ယောက်လုံး စပြီး ကျွန်တော့်ကို အနမ်းပေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ငြင်ငြင်သာသာပွတ် သပ် သေးတာပါ။ ကျွန်တော့်သွေးတွေ ဆူပွက်လာပြီး ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်လာပါပြီ။ ကိုဦးက မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင် တွယ်ဖိည္ဓစ်နေသလို၊ ထွန်းထွန်းကတော့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကြားက အပျိုစင် ခရေပွင့်ကို စမ်းသပ်ရှာဖွေနေတယ်။
ရုတ်တရက် ကိုဦး ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားထဲမှာ သူ့ဒူးအစုံကို ထောက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနွေးနွေးနဲ့ စလျက် ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်နီုင်မှာလဲ ဒီအချိန်ခဏ ဖြစ်ပျက်နေတာကို စိတ်ထဲအတော်မပျော်သလို ဖြစ်မိနေသလို တစ်ဖက်ကလည်း ယုံ ကြည်မှုရဲ့အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုထက်ကို များနေပါတယ်။ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်နောက်ကရပ်ကာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကိုနမ်းရင်း တင် သားဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ပါရဲက သူ့သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လည်မျိုထဲ တဆုံးသွင်းလိုက်ချိန်မှာ။
ကိုဦးက ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်တယ် လက်တစ်ဖက်က၊ နောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အရင်းက ဆုပ်ကိုင် ရင်း ကျွမ်းကျင်သူ့ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာ တကယ့်ဆရာကျနေတာပဲ။ သူတို့ရဲ့ ဒီလိုပြုစုမှုကောင်းကောင်းကြောင့် ကျွန်တော် ကြာရှည်မထိန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ရွှေဥတွေ ပေါင်ခြံမှာကပ်သွားရင်း ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည်တွေ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသစ်တွေ့တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလေးတွေက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ? သူတို့ငပဲကနေ သုတ်ရည်တွေထုတ်ဖို့ ကျွန်တော့်အလှည့် တဲ့။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ သူတို့လာပြီး မတ်တပ်ရပ်တော့ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တာမှာ မတ်ထောင်နေတဲ့ သူတို့ငပဲတွေဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို တည့်တည့်ချိန်ရွယ် နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ငပဲတွေကို ခဏတော့ စိုက်ကြည့်နေမိသေးတာက နှစ်ချောင်း လုံဟာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းထက် ပိုပြီးရှည်သလို တုတ်လည်းပိုတုတ်တယ်ထင်ရတာကြောင့်ပါ။ အားရပါးရနှစ်ခုလုံးကိုဆုပ်ကိုင် ကိုဦး ငပဲ ထိပ်ကိုလျှာနှင့် ကောင်းကောင်းကျွေးလိုက်တော့ သူက ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို ပြန်ကိုင်ပြီး သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲရောက် အောင် ကြိုးစားတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနဲ့ကောင်းကောင်းလျက်သလို ကျွန်တော့် လက်ချောင်းတွေက သူ့လိင်တံကို ကိုင်ကာ -ု ပေးလိုက်ရုံအပြင်တခြားလက်က ရွှေဥတွေကို အလုပ်များစေတာပေါ့နော်။
အချိန်ခဏကြာတော့ ထွန်းထွန်းငပဲကိုပြောင်းပြီး အလုပ်ရှုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ဟာက ထိပ်အရေပြားမဖြတ် တုတ်လိုက်တာလွန်ရော။ ပါး စပ်ထဲမဆန့်မပြဲပေမယ့် -ုပ်ရတာတော့ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုဦးက သူ့ငပဲကို ခပ်မြန်မြန်ပဲပြောင်းပြီး -ုပ်စေတာက ပူနွေးတဲ့ချော်ရည် တွေ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲအပြည့်ဖြည့်တာ သည်းတောင်သည်းတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ပျစ်တွေ သန့်စင်သွားအောင် လျာနှင့် သန့်ရှင်းပေးအပြီးမှာ ထွန်းထွန်းငပဲကိုပြန်ပြီး -ုပ်ရတယ်။ ထွန်း ထွန်းက သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ဆံပင်နှင့် မျက်နှာတွေပေါ်ဖြန်းပက်ပါရော သူ့အ ရည်ပျစ်တွေ။
နေရောင်တန်းတွေရဲ့အောက်မှာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဖြာကျစေရင်း မြက်ခင်းပေါ်လှဲလျောင်းနေကြပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအသစ်တွေကို လေ့လာဖို့အခွင့်အရေးပေးပါရဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက ၁၉နှစ်ဖြစ်တော့ ကျွန်တော့် ထက်တစ်နှစ်ကြီးတယ်။ အားကစားလိုက်စားတဲ့ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေက ကျွန်တော့်ထက်ပိုမိုတောင့်တင်းသလို ပစ္စည်းကလည်း ကျွန်တော့်ငပဲထက်ထွားသလိုပဲ။ သူတို့မျက်နှာကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ကလေးဆန်တဲ့ မျက်နှာထက်စာရင် ယောက်ျားပိုဆန်တယ် ကွာခြားတယ် ထင်တာပဲဗျာ ကြည့်ရတာ။
တစ်နာရီကျော်လောက်ကြာတော့ ဘော်ဒါနှစ်ယောက်ရဲ့ငပဲတွေပြန်ပြီး ခေါင်းထောင်ထလာကြတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့မျက်ဝန်းတွေကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ သိမ့်ကနဲခံစားရကာ ကြက်သီးတွေဖြန်းကနဲထလာပါရော။ သားကောင်ကို ခုန်အုပ်တော့မယ့် ကျားသစ်နက်တွေရဲ့ မျက်လုံးအကြည့်တွေအတိုင်းပါပဲ။ ရုတ်တရက် သူတို့ကျွန်တော်လှဲနေရာဆီ ချဉ်းကပ်လာကြကာ ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေ လက်တွေကို ချုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားကို နေစေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွေးမိရတာက သူတို့ကို တောင်းပန်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ပါရစေတော့လို့ပြောမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ အားပါးတရရယ်မောကာ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်ခေါင်း ပိုင်းကိုချုပ်ကိုင်သလို ကိုဦးက ကျွန်တော့်ကို ဒူးထောက်ပြီး ကုန်းတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင် အတင်းအကြပ်။ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို-ိုး တော့မယ်၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ မသိတော့သလို ရုန်းကန်ခြင်းလည်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကိုဦးတစ်ယောက် သူ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲက ဘူးကိုယူလိုက်ကာ ဘာလုပ်နေတယ်မသိ။ ခဏနေတော့ သူ့လက်ချောင်းအချို့ဟာ ကျွန်တော့်အပျိုစင်ခရေပွင့်ထဲ တိုးဝင်လာတာကို ခံစားရပါတယ်။ သူတို့လုပ်ဆောင်နေတာကိုကြည့်ရတာ အစကတည်းက အစီ အ စဉ်တွေရှိထားသလိုပဲ။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကြာအောင်နှိုက်နေပြီးမှ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ သူ့ငပဲခေါင်းကိုချော့ပြီးသွင်းပါ တော့ တယ်။ ပထမတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကိုဖြဲပြီး အကွဲကြောင်းတလျှောက် သူ့ငပဲနှင့်ပွတ်သပ်နေသေးတာပါ။ ပြီးမှ ထွန်းထွန်းကို 'အိုကေ...လှုပ်ရှားစို့' တဲ့လှမ်းအော်လိုက်တယ်။ ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်လက်တွေကို မရုန်းနိုင်အောင်ချုပ်ကိုင်ပြီးချိန်မှာတော့ ခရေ၀ ဆီက တိုးဝင်လာတဲ့ နာကျင်မှုကို ခံစားလိုက်ရပါရဲ့။ ကိုဦးရဲ့ဆီးစပ်ကအမွှေးတွေနှင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေဖိကပ်တာကို ခံစားရတဲ့ အထိပေါ့။ 'အာ...အ' သူ့ခါးကိုလှုပ်ရမ်းပြီး မွှေနေသေးတာဗျ....အထုတ်အသွင်းမလုပ်ဘဲ။
သူကပြောသေးတယ် နာကျင်တာ ခဏပဲခံစားရမှာတဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲအရှည်ကြီးကို ခရေ၀ထဲ ပိုနက်သထက်နက်အောင် တွင်းတူး မြှုပ်တယ်။သူစပြီးသွင်းကာစက အရမ်းနာမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်အရမ်းလန့်ခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ နည်းနည်းသာယာလာသလို စတင်ခံ စားရပါပြီ။
ကျွန်တော့်လက်တွေ မပွန်းရှကုန်လို့တော်သေးတာပါ။ ကိုဦးက ကျွန်တော့်ခါးကို အားရပါးရကိုင်ကာ လှုပ်ရှားနေသလို ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့် ပခုံးတွေကိုချုပ်ကိုင်ကာ နောက်ပိုင်းဆီကို ပိုမိုရောက်အောင် လှုပ်ရှားမိအောင် ဖိဖိတွန်းပေးပါတယ်။ ကိုဦးငပဲက ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲ ပိုမိုရောက်ရောက်စေတာ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း လှုပ်ရမ်းနေရပေါ့။
သူ -ိုးနေတာကို ဒီပုံစံအတိုင်း ဘယ်အချိန်ထိ ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မလဲ ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ ကိုဦးအသက်ရှူသံတွေပြင်းလာသလို ဆောင့် သွင်းချက်တွေမြန်လာကာ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ခါးကော့သွင်းလိုက်ရင်း အရည်ပျစ်ပျစ်တွေ ပန်းထည့်ပါတော့တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ခရေ၀ ထဲက ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ မြက်ခင်းပေါ်ကို နွမ်းလျစွာ ပစ်လှဲမိပါ၏။ ကိုယ့်ပေါင်ကြားကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိပြန်တော့ အံ့အား သင့်စွာ မာတောင့်နေတာကိုလည်း မြင်လိုက်ရပါပြီ။
ထွန်းထွန်း ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို သူ-ိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ငပဲက အရမ်းမာမနေဘဲ မမာ့တမာအခြေအနေဖြစ်နေတာကိုးလေ။ ကျွန်တော့် ကို ခဏနေက အနေအထားအတိုင်း နေစေချင်ပေမယ့် ရုန်းကန်တာကြောင့် ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုဆွဲယူ သူ့ပခုံး ပေါ်တင်လိုက်ကာ တင်ပါးတွေကို ကြွစေသပေါ့။ ကိုဦးက ကျွန်တော့်လက်အစုံကို မြက်ခင်းပေါ်ဖိကိုင်ထားပါတယ် တစ်ခုခုမလုပ်နိုင် အောင်။ သူ့ငပဲ ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းကိုဖြတ်သန်းလျက် ခရေ၀ထဲတိုးဝင်သွားချိန်မှာတော့ နာကျင်မှုနဲ့ရောနေတဲ့ သာယာမှုကို ခံစားရပါတယ်။ ကိုဦးပြောတာမှန်တယ် ကျွန်တော့်တင်ပါးခပ်ထူထူတွေနဲ့ဆို သူတို့ငပဲကို ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာ။
ထွန်းထွန်း အရှီန်ပြင်းစွာ လှုပ်ရှားနေရာကနေ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ကိစ္စကို အဆုံးမသတ်ချင်သေးတာကြောင့် သူ့စိတ်သူထိန်း လို့ရသေးချိန်မှာ ကြိုးစားလိုက်ခြင်းပါပဲ။ ခဏလေးရပ်တန့်နေပြီးနောက်မှ ထပ်ပြီးကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုနှောင့်ယှက်တာမှာ ကျွန်တော်သည် လည်း ဘယ်လိုမှမနေနိုင်စွာ ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားလိုက်တာမှာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေ ရင်အုပ်တွေမှာဖြင့် ချွဲပျစ်ပျစ်အရည်တွေစိုရွှဲကုန်ပါပြီ။ အဲဒီလိုဖြစ်လိုက်ခြင်းက ကျွန်တော့်ဘော်ဒါအသစ်တွေရဲ့စိတ်ကို ဆွပေးတဲ့ သဘောဖြစ်သွားသလား မသိ။ ဘာကြောင့်ဆို ခရေ၀ထဲကို ငပဲထည့်သူက မပြီးသေးခင် အထွဋ်အထိပ်ခံစားမှုရဲ့အဆုံးသတ်ကို သူတို့မြင်သွားရခြင်းကြောင့်လေ။ အချိန်ခဏမှာပဲ ထွန်းထွန်း ထိန်းချုပ်ထားတာတွေလွတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ် နေ့မွန်းလွဲအချိန် နုပျိုတဲ့ ခရေပွင့်ထဲ အရည်အများအပြား ဖြည့်ပေးပါရော။
ဒါဟာ စွန့်စားခန်းနေ့တစ်နေ့ရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အ၀တ်တွေပြန်လည်ဝတ်ဆင်ပြီး အိမ်ကိုခြေလျင်လျှောက် ပြန် ခဲ့ကြပါတယ်။ အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာ လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းတိုင်း ကျွန်တော်ပြန်သတိရနေစေတာက မနက်က ကျွန်တော်နှင့် အခု မတူတော့ ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ ငံကျိကျိအရသာကို ခံစားလို့ရဆဲဖြစ်သလို တင်ပါးဆုံကလည်း ထူပူပြီး တော်တော်နာနေသလို ခံစားရနေဆဲပါ။ မာမီက တောထဲသွားကြတာပျော်ရဲ့လားတဲ့။ 'အပျော်ဆုံးနေ့ပဲမာမီ' လို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်။
'ဒါဆို ဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ အပြင်ထွက်ဦးမယ်ပေါ့' ကျွန်တော့်အဖြေအပြီးမှာ မာမီက ထပ်မေးတယ်။
'လောင်းလိုက်လေ မာမီ! ဒီသစ်တော်အုပ်ကြီးအကြောင်း သားသင်ယူရရှိခဲ့တာ အများကြီးပဲ၊ ပြီးတော့ သူတို့ ကျွန်တော့်ကို နေ့တိုင်းလို လို ခေါ်သွားမယ်လို့ ကတိပေးထားကြပြီးပြီဗျ' လို့ထပ်ပြောလိုက်တယ်။
'မာမီက သား ပျော်တယ်မဟုတ်လား? သားပျော်ဖို့ အဲဒီကိစ္စက မှန်တယ်ဆိုရင် မာမီက ခွင့်ပြုရမှာပေါ'့ တဲ့လေ။
Alex Aung (21 July 2011)
စာကြွင်း။ ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်အရမ်းကိုခံစားနေရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြောင့် ချစ်သူရဲ့လမ်းခွဲမှုစာကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ပြီးတော့ အလိုက်မသိမှုကြောင့် ငြိုငြင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လက်တွဲဖော်အဖြစ် သူချစ်ကိုယ် ချစ်ဆိုပြီး အရမ်းစူးစူးနစ်နစ်ချစ်ခဲ့တာအမှန်ပါ။ ဘယ်လိုပဲခံစားနေရပါစေ....ဒါကိုခံစားပြီး စာရေးနှေးသွားတာအတွက် စာကိုကြိုးစား ရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Posted by Alex Aung at 5:05 PM
My E-Mail said...
so sorry to hear abt ur love news. anyway thx for uploading new post